Zimbabwe court to rule on results; Mugabe warns against "colonizers"
7 April 2008 11:55 (UTC+04:00)
(dpa) - A court in Harare was due to decide Monday whether to force the Zimbabwe Electoral Commission (ZEC) to release results from March 29 presidential elections, in which President Robert Mugabe is fighting for his political survival.
Tsvangirai has already claimed outright victory, saying he took 50.3 per cent of the vote but Mugabe is already campaigning for a widely-predicted second round - called for if neither candidate takes more than 50 per cent.
Addressing a funeral Sunday Mugabe told Zimbabweans to safeguard their land from "former colonizers," the state-controlled Herald quoted him as saying.
In an opinion article in Britain's Guardian newspaper Monday Tsvangirai urged the International Monetary Fund to withhold 1 billion pounds (2 billion dollars) in funds for Zimbabwe's reconstruction until Mugabe concedes defeat and called for South Africa, the US and Britain to intervene.
Although the official presidential results have yet to be released Mugabe's Zanu-PF party has already demanded a recount, claiming counting errors in four constituencies.